Torohevitra sy Fomba Fikarakarana Sakafo Paragoaiana Voalanjalanja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2017 16:20 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Ελληνικά, русский, Español
Amin'ny alalan'ny andian-tantara #jakaruporahagua ( “misakafo tsara” amin'ny teny guarani izay arahana tetikasa mitovy anarana aminy ), manohy ny hetsika ataony ho an'ny tany sy ny fanjifana ara-drariny; toy ny vondrom-piarahamonina sy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena maro izay natokana ho an'ny zo hisakafo sy ho fanavaozana ny tontolon'ny fambolena ny tranonkala Paragoaiana Kurtural .
Maro ny tetikasa no mampiasa ity tambajotra ity mba hanorenana fifandraisana sy mba hivoarana ao anaty vondrom-piarahamonina samihafa. Toy ny fianakaviana manangana orinasa, ny “fokon'ny mpamokatra”, ny vondrom-piarahamonina miaro ny zo amin'ny tany ary ireo mpanao zava-baovao ihany koa izay sahy misintaka amin'ny fipetrapetraha-poana sy ny fomba fiainana fahiny. Noho izany niasa nandritra ny taona maro ho mpanao mari-trano tany Etazonia i Carlos Diaz Meyer, mpampiroborobo ny tetikasa De la Huerta Orgánica, ary noho ny fifandraisany tamin'ny Paragoaiana tany New York dia afaka nanokatra ny lalana ho any amin'ny fambolena izy;